बिराटचोकमा सिभिल बैंकको शाखा संचालनमा, बैंकसंचालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेश दाहालद्धारा शाखा उद्घाटन
Posted: 2018-01-07 15:47:40
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले मोरङको बिराटचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकको मर्जरबाट प्राप्त भएको शाखा सहित ईटहरीमा भएको दुई शाखा मध्येको एक शाखालाई स्थानान्तरण गरी बिराटचोकमा संचालनमा ल्याईएको हो । उक्त शाखाको समुद्घाटन सिभिल बैंकका संचालक प्रा.डा. रमेश दाहालले गर्नु भएको थियो । उक्त शाखाको उद्घाटन समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी लगायत गन्यमान्य ब्यक्ति तथा सर्वसाधरणको बाक्लो उपस्थिति थियो । सिभिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन संगसंगै आफ्ना ग्राहकवर्ग तथा अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हितलाई ध्यानमा राखी आफ्ना सेवा सुविधालाई परिस्कृत गर्दै लैजाने र आफ्नो पहुँचलाई विस्तार गर्दै व्यवसाय अभिवृद्वि गर्दै जाने कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले ...
वित्तिय साक्षरताको लागि ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को प्रभातफेरि,बैंकले एघारौँ बर्ष पूरा गरि बाह्रौँ बर्षमा प्रबेश गरेको अवसरमा बिगतका बर्षहरुमा जस्तै यसबर्ष पनि बिभिन्न कार्यक्रमको अयोजना गरेको
Posted: 2018-01-07 14:42:48
ग्लोबल आइएमई बैंकले एघारौँ बर्ष पूरा गरि बाह्रौँ बर्षमा प्रबेश गरेको अवसरमा बिगतका बर्षहरुमा जस्तै यसबर्ष पनि बिभिन्न कार्यक्रमको अयोजना गरेको छ । एघारौँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले पौष २२ गते राजधानीमा वित्तिय साक्षरता जगाउने उद्धेश्यले प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । ...
Posted: 2018-01-05 15:21:05
काठमाडौं । अब कुनै पनि बैंकको खातामा अर्को बैंकबाट पनि रकम जम्मा गर्न सकिने भएको छ । अहिले एकाउन्टपेयी चेक जम्मा गरेर अर्को बैंकबाट ग्राहकहरुले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका छन् । अब भने नगदै जम्मा गर्न सकिने भएको हो । ‘बिहीबारको सञ्चालक समिति बैठकले यससम्बन्धि कार्य्विधि पारित गरेको छ, केही समयपछि हामी यो निर्देशन जारी गर्नेछौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने । राष्ट्र बैंकले करिब एक वर्षअघि शुरु गरेको भुक्तानी प्रणाली विभागका काम, कारवाहीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा शिवाकोटीले नयाँ बैंकिङ प्रणालीबारे बताएका हुन् । ...
ग्लोबल आइएमई नवनिर्मित कर्पोरेट÷रजिष्र्टड कार्यालयको समुद्घाटन, ग्लोबल आइएमई बैंक लि. ले स्थापनाको ११ वर्ष मा नै आफ्नौ कर्पोरेट÷रजिष्र्टड कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको
Posted: 2018-01-03 13:05:30
काठमाडौं- ग्लोबल आइएमई बैंक लि. को ११औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको नवनिर्मित कर्पोरेट÷रजिष्र्टड कार्यालयकोे नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरंजिवी नेपालले उुद्घाटन गर्नुभएकोे छ । सन् २००७ मा वीरगञ्जमा रजिष्टर्ड कार्यालय राखि स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैंक लि. ले स्थापनाको ११ वर्ष मा नै आफ्नौ कर्पोरेट÷रजिष्र्टड कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको हो । ...
बैंकहरुबीच निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र’ सहमति, बजारमा निक्षेप तानातान गर्ने होडवाजी, खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसरी बैंकहरुले सहमति गरेर यति वा उति प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भन्ने भद्र सहमति कार्टे्लिङ वा सिन्डिकेट भएको आरोप
Posted: 2018-01-02 12:54:23
काठमाडौं -लगानी योग्य रकम (तरलता) को चरम अभाव भएपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाए । निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुबीच व्याजदर बढाउन तँछाडमछाड नै भयो । बैंकहरुकोबीचको यही प्रतिस्पर्धाका कारण अहिले मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले साढे १३ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेका छन् । यसरी ब्याज बढेपछि बैंकहरुको लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ । बैंकहरुले यसरी रातारात ब्याजदर बढाउन थालेपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ गरेको छ । आज या भोलि नै संघको कार्यसमितिको बैठक बसेर औपचारिकरुपमा निर्णय गरेर बैंकहरुलाई सर्कुलर गर्ने सहमति भएको संघका एक सदस्यले जानकारी दिए ।...